Workflow: Inona izany, ahoana ny asany ary inona no azoko atao miaraka aminy | Vaovao IPhone
Azo antoka fa maro aminareo no efa nandre fangatahana antsoina Workflow. Tsy very maina, tao amin'ny iPhone News dia efa namoaka lahatsoratra vitsivitsy momba an'ity fampiharana ity izahay ary miaraka amin'ny teny tsara foana. Saingy ny vidin'ny fampiharana (4.99 € ivelan'ny fampiroboroboana) sy ny tsy fahalalana momba ny fampiasana azy na ny zavatra azony atao dia mety hampihena antsika ary tsy hitondra antsika amin'ny fampiharana mendrika, nefa be dia be. Fampiharana iray izay tokony ho nataon'i Apple mihitsy, nanomboka mitovy be amin'ilay fampiharana Mac, Automator.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hiezaka aho hanazava zavatra maromaro momba ny Workflow mba ho mazava aminao ny teboka sasany momba ny fampiharana. Saingy, ho topy maso dia holazaiko anao fa mahomby izy io mandeha ho azy ny hetsika izay afaka mandingana ny fetra iOS sasany aza, ohatra, ohatra, ny fandefasana sary mihoatra ny 5 amin'ny alàlan'ny mailaka na fandefasana hira amin'ny Telegram na Mail (amin'ny WhatsApp dia tsy azo atao izany satria tsy mifanaraka). Alohan'ny handefasan'ny WhatsApp sary avy ao anaty horonana, navelan'i Workflow hanitatra.
1 Inona ny Workflow
2 Ahoana ny fiasan'ny workflow
3 Inona no azoko atao amin'ny Workflow
3.1 Hizaha rakitra rehetra
3.2 Bitsiho ny hira henontsika
3.3 Sakano ary amboary kaody QR
3.4 Lahatsoratra handika
3.5 Mandefasa hira
3.7 Mandefasa sary mihoatra ny 5 amin'ny alàlan'ny mailaka
3.8 Mamorona GIF avy amin'ny sary maro
3.9 Avelao ny iPhone hamaky anay an-tsoratra
3.10 Amboary ny sary miaraka amin'i Aviary
3.11 Sintomy ny horonan-tsary sy mozika avy amin'ny Youtube
3.12 Misintona tranokala amin'ny PDF ary afindra amin'ny iBooks
3.13 Bitsika ny GIF avy ao anaty roul, ataovy GIF avy amin'ny horonan-tsary ary zahao ireo GIF rehetra ao anaty roul
3.14 Tadiavo ny fiarako
3.15 Export horonan-tsary mihetsika miadana
Inona ny Workflow
Ny workflow, araky ny anarany dia fampiharana "workflows". Hanampy antsika izany mamorona hetsika na fanitarana hanao saika ny zava-drehetra. Ny tsara indrindra dia izany ny hetsika dia azo ampifandraisina, izay hamela antsika, ohatra, hamorona sary ary avy eo hizara izany amin'ny Twitter, izay rehetra tsy ilaozana ny «mini application». Ho fanampin'ny fiasa mahazatra, afaka mamorona fanitarana isika izay "antsoinay" avy amin'ny bokotra zaraina (
). Ohatra, ny misintona horonantsary YouTube avy amin'ny Safari.
Nota: Mba hahafahana mampiasa ireo fanitarana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra fizarana, voalohany dia tsy maintsy manindry "More" isika ary mampandeha ny safidy "Run Workflow", raha tsy ampiasaintsika izy io.
Ahoana ny fiasan'ny workflow
Workflow dia manana teboka tsara hetsika sy fihetsika tena tsotra miaraka amin'ny ambaratonga mandroso kokoa no azo foronina. Araka ny hitanao amin'ireo sary etsy ambany amin'ireo andalana ireo, manana takelaka roa izahay: «Fihetsiketsehana» sy «Workflow». Ny zavatra tsy maintsy ataontsika dia ny mankany amin'ny takelaka "Actions" ary tariho izy ireo (mitazona ny rantsan-tànana amin'ny hetsika) mankany amin'ny takelaka Workflow. Izany dia nohazavaina tamin'ny fotoana voalohany nanokafantsika ny rindranasa, izay terena hamorona applet hamorona GIF mihetsika avy amin'ny sary maro samihafa. Raha ny marina dia tsotra ny fandidiana ankapobeny, na dia somary manasarotra aza izany raha te hanao zavatra sarotra kokoa isika. Fa ny zavatra tsara dia misy vondron'ireo mpampiasa izay mamorona onjam-piasa isan'andro ary navoaka tao amin'ny tranonkala workflow-vcs.de. Manoro hevitra anao aho mba hanao toa ahy, izay ny fandehanana any amin'io tranonkala io, mampiasa ny fivezivezin'ny olon-kafa ary jereo ny fomba nanatanterahan'izy ireo izany.
Ataovy ao an-tsaina fa misy karazany roa ny workflows: rindranasa, izay azontsika alefa amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny Workflow sy ny fanindriana indroa amin'ny rindranasa iray na avy amin'ny fidirana mivantana avy amin'ny SpringBoard (raha noforoninay izy io), ary avy eo manana ny fanitarana, izay afaka manomboka amin'ny rindranasa hafa, toa ny misintona horonantsary YouTube.
Inona no azoko atao amin'ny Workflow
Saika ny zava-drehetra. Na dia mbola afaka manampy safidy maro hafa aza ianao, ary raha ny marina dia mety ampian'izy ireo ny sasany izay nangatahiko, Workflow dia manana hetsika marobe izay azo ampifangaroana ka ny iPhone-tsika dia voafetra lavitra noho ny tsy misy an'ity fampiharana ity. Ny zavatra tsara indrindra hahafantarana izay azonao atao amin'ny Workflow dia ny fitsidihanao ny tranonkala nomeko anao taloha na, ny zavatra hataoko, no zaraiko aminareo ny fiasa sy ny fanitarana izay ananako ao amin'ny iPhone. Tokony hiaiky aho fa ny sasany amin'izy ireo dia tsotra araka izay tratra (toy ny GIF amin'ny bitsika), fa manao ny asa izy ireo.
Hizaha rakitra rehetra
Hanomboka amin'ny fanitarana faran'izay tsotra nefa tena mandaitra aho. Miresaka momba ny Preview. Amin'ity fanitarana ity dia afaka jerentsika saika izay rakitra ananantsika amin'ny iPhone. Izy io dia miasa amin'ny fomba marina ampiasaintsika amin'ny Mac OS X raha mikasika ny bara habakabaka isika rehefa manana rakitra voafantina. Miaraka amin'ny topi-maso dia afaka mahita hatramin'ny GIF avy amin'ny rool isika, mamela antsika hijery horonantsary, mihaino mozika, mahita lahatsoratra ...
Bitsiho ny hira henontsika
Amin'ny endrika #NowPlaying madio indrindra, azontsika atao ny manoratra ilay hira henontsika amin'ny alàlan'ny hafatra manokana (hira, mpanakanto, emoji ...) miaraka amin'ny sarin'ny fonon'ny rakikira.
Sakano ary amboary kaody QR
Tsy mila manana rindranasa hijerena kaody QR izahay. Azontsika atao ny mamaky azy ireo avy amin'ny Workflow (ary, raha mamaky tranokala ianao dia azonao atao ny mamaky azy avy amin'ilay workflow iray ihany). Ho fanampin'izay, azonao atao ny mamorona kaody QR ho anay handefasana hafatra "tsy misy hadalana".
Manana fitaovana vonona handika lahatsoratra izahay. Izy io dia miasa mitovy amin'ny ankamaroan'ny rindranasa ao amin'ny App Store, fa raha efa manana Workflow isika dia afaka manao raha tsy misy ny hafa.
Raha mifanaraka amin'ny fandefasana rakitra ilay rindranasa, afaka mandefa hira avy amin'ny Workflow izahay. Notsapaiko tamin'ny alàlan'ny fandefasana azy ireo amin'ny alàlan'ny mailaka sy amin'ny alàlan'ny Telegram ary miasa tsara izy io.
Iray amin'ireo fitarainan'ny mpampiasa hatramin'ny nahatongavan'ny iOS 8 ny tsy fahatomombanan'ny iCloud Drive. Miaraka amin'i Worfkflow isika dia afaka mivezivezy amin'ny alàlan'ny lahatahiry iCloud ary mijery ireo rakitra tsy mila mampiasa fampiharana avy amin'ny App Store, satria saika miadana dia miadana izy rehetra. Azontsika atao ny mijery ireo rakitra ary manokatra azy ireo amin'ny fampiharana atoro anay.
Mandefasa sary mihoatra ny 5 amin'ny alàlan'ny mailaka
Fepetra iray avy amin'i Apple, ary heveriko fa hiarovana ny drafitry ny angon-drakitra izany dia ny tsy ahafahantsika mandefa sary mihoatra ny 5. Miaraka amin'ny Workflow, tsy misy io fetra io.
Mamorona GIF avy amin'ny sary maro
Miankina amin'ny workflow noforonina, afaka misafidy sary marobe amin'ny roul isika hanao GIF na afaka maka sary maro alohan'ny hamoronana azy. Ny hetsika izay entiko anao dia amin'ny karazany faharoa, mitovy amin'ny fampiharana Jittergram.
Avelao ny iPhone hamaky anay an-tsoratra
Azontsika atao ny mamaky an-tsika ny iPhone an-tsoratra ampidirina amin'ny tanana. Mety ho tonga mora ampiasaina izany raha te hahalala zavatra iray izay tsy azontsika vakina amin'ny fotoana iray. Toy izany koa, afaka manana tranonkala iray vakiana amintsika isika.
Workflow Mamaky lahatsoratra
fanitarana Vakio ny Internet
Amboary ny sary miaraka amin'i Aviary
Ity dia fanitarana izay mety ho tonga mora ampiasaina raha te-hanitsy sary amin'ny fomba tsy avelan'ny rindran-drazana isika. Ohatra, fitaratra ny sary hanovana ny orientation-ny. Na dia nantsoiko hoe "fanovana haingana" aza dia mety tsy ho haingana toy izany indraindray, mazava ho azy.
fanitarana Edit haingana
Sintomy ny horonan-tsary sy mozika avy amin'ny Youtube
Zavatra mety hahaliana ny olona maro, saingy tsy mahita ny fampiharana sy ny maody foana izy ireo. Miaraka amin'ny Workflow dia afaka manao roa isika. Ny zavatra ratsy amin'ny mozika dia ny tsy fandehany any amin'ny application Music, raha tsy izany dia tsy maintsy misafidy mpilalao hafa isika hanokatra azy.
fanitarana avy amin'ny YouTube ka hatrany amin'ny Reel
fanitarana YouTube mankany MP3
Misintona tranokala amin'ny PDF ary afindra amin'ny iBooks
Azontsika atao ny manova tranokala ho PDF ary manokatra azy mivantana amin'ny iBooks. Na dia ara-dalàna aza, ny tranonkala dia tsy misintona mitovy tanteraka, ny atiny (lahatsoratra, rohy ary ny ankamaroan'ny sary) dia azo dinihina tsy misy olana.
fanitarana Avy amin'ny Internet ka hatramin'ny iBooks
Bitsika ny GIF avy ao anaty roul, ataovy GIF avy amin'ny horonan-tsary ary zahao ireo GIF rehetra ao anaty roul
Safidy izay tsy azoko satria tsy misy io zanatany io. Ny workflow dia tonga hamonjy indray ary hamela antsika handefa GIF izay ananantsika amin'ny roul (na amin'ny toeran-kafa, fa ny fanitarana kosa tsy maintsy novaina). Ho fanampin'izany, afaka mamorona GIF avy amin'ny horonan-tsary fohy isika (ireo lava manantona ilay rindranasa) ary mahita ireo GIF rehetra ananantsika ao anaty rool raha tsy mila mitady azy ireo tsirairay akory isika.
fanitarana Tweet GIF avy ao amin'i Reel
Workflow Manaova GIF amin'ny horonan-tsary
Workflow Mpijery GIF Reel
Tadiavo ny fiarako
Tahaka ny fiasan'ny rindranasa sasany ao amin'ny App Store, miaraka amin'ny Workflow dia afaka mamonjy ny toeran'ny fiaranay isika, ary manaraka ny lalana miverina amin'ny alàlan'ny sari-tanin'i Apple.
Workflow Tadiavo ny fiarako
Export horonan-tsary mihetsika miadana
Raha sendra manana olana ianao amin'ny fizarana horonan-tsary mihetsika miadana, Workflow dia hamela antsika hitahiry ireo horonan-tsary ao amin'ny Slow Motion mba ho hitan'izy ireo amin'ny mpilalao rehetra (zava-dehibe: amin'ny mpilalao AZY, tranonkala, serivisy ...).
fanitarana Export Slow Motion
Araka ny hitanao dia afaka manao ny zava-drehetra tanteraka ianao. Ireo ny workflows ampiasaiko, fa afaka manao zavatra betsaka kokoa ianao. Aza mitsahatra mitsidika ny tranonkala natolotro teo aloha dia ho tsapanao fa tsy misy fetra ny iPhone-nao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Workflow: inona izany, ny fomba fiasa ary inona no azoko atao miaraka aminy
Lahatsoratra tsara! Mitovy amin'ny fampiharana IFFFT ve izany? Nampiasa ity farany ve ianao? Tsy mbola tafavoaka mihitsy aho. Hitako fa samy ampiasaina hamoronana "recette". Hampidina azy ireo aho hanandrana, nanintona ny saiko izy ireo.
Tsara ny tolakandro, gaxilongas. Tsy mitovy izy ireo. Samy nanandrana aho ary ny IFTTT (IF izao) dia rehefa manao "zavatra" ianao dia "manao zavatra hafa" avy hatrany. Ohatra, rehefa manampy fifandraisana amin'ny kalandrie ianao dia misy fampahatsiahivana noforonina ho anao mba hanaovana kopian'ny fifandraisana. Na raha manomboka orana dia mahazo fampandrenesana. Etsy ankilany, ny Workflow dia noho izany, hoy izy haingana, dia mamorona ny rindranonao manokana ianao. Ohatra, famoronana GIF mihetsika na fitadiavana ny fiaranao.
Misaotra tamin'ny fanazavana an'i Pablo. Miarahaba anao!
gabrielort dia hoy izy:
INDRINDRA PABLO, TSY FANTATRAO RAHA NATAO ANAO SATRIA NY FANGATAKANA IZAO NO NANGATAKA ANAO ANAO TAMIN'NY POST HIDIANA VIDEO AMIN'NY CAMERA KOSA, FA MBOLA MISAOTRA MANKASITRAKA TALAKA, POST FANAMPINY FA EO AMBONY AO ANATIN'NY BLOG MAFALY REHETRA! Novakiako izy ireo hatramin'ny taona 3 efa ho 4 taona izay, firarian-tsoa avy any VENEZUELA !!!
Mamaly an'i gabrielort
Amin'ny ampahany, eny 😉 Hitako fa tsara ny fampiharana mandritra ny fotoana fohy ary ny fanehoan-kevitrao dia nanome ahy ny fanerena farany hizara izany amin'ny olon-drehetra.
Rafael Pazos placeholder image dia hoy izy:
EEEH PABLO GOOD POST, tsy fantatro ny fomba nampiasana azy, ankehitriny noho ireo fanazavana nomenao, azoko tsara kokoa !! Misaotra anao !!
Valiny tamin'i Rafael Pazos
Manomboka tsara aho. Efa ela aho no te hanandrana azy ary nanapa-kevitra ihany tamin'ny farany. Apetrako izy ary tsy avelany handeha hatramin'ny voalohany aho, aiza ny tutorial hamoronana ny Gif. Ny tena izy dia mandeha any amin'ny Settings aho ary tsy misy hita ao anatin'ny fampiharana (Te-hahita aho raha nahazo alalana hampiasa ny fakantsary sy hampiasa ny sary avy amin'ny sarimihetsika)
Ara-dalàna izany? Ny ataoko? Mety misy ifandraisany amin'ilay hoe manana beta 2 an'ny iOS 8.4 aho? Andao hojerena raha afaka manampy ahy ianao, tsy haiko intsony izay hanandramana ...
Voavaha. Vitako ny nandingana ny dingana nametraka renirano avy amin'ny tranonkala
Hilario dia hoy izy:
Nividy ny application workflow aho fa rehefa nosokafanao izy dia miteny amiko ny mametraka sary ary avy eo tsy mitranga izany, tsy manokatra ny atiny rehetra
Valiny ho an'i Hilario
Salama, Hilario. Fanombohana ratsy io, saingy hampianatra antsika hampiasa ny fampiharana. Tsy tadidiko raha afaka mandroso haingana ianao izao nefa tsy manaraka ny tutorial, fa raha tsy afaka dia ataovy izay lazainy aminao. Tsy maintsy mamorona ohatra workflow ianao mba hahafahana manohy.
Miarahaba an'i Pablo, fa rehefa omeko azy hanohy dia lazainy amiko fa raha te haka sary aho nefa avy eo dia tsy mitranga izany ary tsy misy miseho, raha fantatrao izay hatao, ampahafantaro ahy
Ny zavatra voalohany ezahiko dia ny manala azy ary mametaka azy. Raha mbola mitovy io dia tereo ny famerenana miverina hijerena raha tratra ilay fakantsary.
Nataoko toy izao in-3 marina izao, hiezaka ny hamerina aho ary hahita izay hitranga, Pablo
yerani ceron (@ ceron23yers) dia hoy izy:
fanontaniana iray momba ny inona ilay rindranasa workflow
Mamaly an'i yerani ceron (@ ceron23yers)
RMZ dia hoy izy:
Mametraha rindrambaiko amin'ny alàlan'ny IPA tsy nasiana mari-pahaizana, avy eo manana olana amin'ny fampandrenesana PUSH aho, dia nahazo fampandrenesana fotsiny aho mandra-panokafako ny fampiharana .... IZAY tiako ho fantatra dia raha misy ny asa aman-draharaha dia azoko atao ny manamboatra ny fangatahana "hisokatra" ho an'ny CERTAIN. NY FAMPANDROSOANA NY FOTOANA AMIN'NY FOTOANA ITY ARY TSY mila mandoa fotoana isaky ny tonga ny zavatra. MISAOTRA ANAO
Valiny amin'ny RMZ
Jessica dia hoy izy:
Salama, zavatra iray tena manan-danja dia ny hahafantarana izay rehetra entin'ity fampiharana ity amintsika, tsy maintsy fantatro ilay fiteny, izao dia manana izany amin'ny teny Anglisy aho, fa ahoana no hanovana ny fiteny ho Espaniola ??? Faly aho fa afaka manampy ahy ianao.
Valio i Jessica
rocio munoz dia hoy izy:
Manokatra ny workflow aho ary tsy haiko hoe iza no hisafidy hampidina horonantsary, tsy misy feo amiko, ny tiako holazaina dia ny valifaty mandeha, tsy mahazo mihoatra an'izany aho
Mamaly an'i rocio munoz
Izaho manokana, ity workflow ity dia nanao zavatra sarotra tamiko, nanakarama an'ity orinasa ity aho ary nanampy ahy ary hamaha ny olako eto dia avelako ny rohinao. https://www.dokuflex.com/
Mamaly an'i daniela
Ahoana ny fomba hijerena bateria iPhone avy amin'ny Apple Watch